Ny faritr'i Italia sy ny renivohitra dia misy saritany faritany
Iza ireo firenena manodidina an'i Italia?
Sarintany bebe kokoa any Italia
Ny fahalalana any an-tsekoly sy ny fahalalana ankapobeny dia zavatra toa izany. Indraindray ianao dia tena fanontaniana tsotra be no apetraka aminao ary, mahamenatra, tsy hainao ny valiny. Ary azo antoka fa tsy izany mihitsy raha ny firenena mifanakaiky na ny firenena fialantsasatra mahazatra.
Iza ny anaran'ireo faritra any Italia sy ny renivohitra?
Ity ny valiny noho ny faritra: Mizara 20 faritra i Italia miaraka amin'ireto renivohitra ireto:
Region Anarana italiana RENIVOHITR'I
Abruzzo Abruzzo L'Akoila
Friuli Venezia Giulia Friuli Venezia Giulia Trieste
marika MANDEHANA Ancona
Piedmont Piemonte Turin
Sisila Sicilia Palermo
Trentino-Tyrol atsimo Trentino-Alto Adige Trent
Ny sarintanin'i Italia dia mampiseho ireo faritra italiana misy anarana italianina ary koa ny fandikan-teny alemanina. Azafady tsindrio ny sarintanin'i Italia hanitatra azy:
Sarintanin'i Italia misy faritra
Firenena enina no mifanila amin'i Italia. Ireto manaraka ireto dia mifanila amin'i Italia:
avaratr'i Austria sy Suisse
any andrefan'i Frantsa
any atsinanan'i Slovenia
San Marino sy Vatican City dia voahodidin'ny faritany italianina tanteraka
Sarintanin'i Italia misy faritra tsy misy anarana
Sarintany Italia hamolavola ny tenanao
Sarintany any Austria | sarintany
Sarintanin'ny Moyen Orient
Sarintany cantons Suisse
Sarintany miaraka amin'ny faritany sy faritany i Kanada
Sarintany amerikanina atsimo
Sarintany USA miaraka amin'ny fanjakana